Madaxweynaha Jubba oo booqday Muqdisho si loo dhameeyo heshiiskii dowladda iyo maamulka – Radio Daljir
Seteembar 7, 2013 4:33 b 0
Muqdisho, September 7, 2013- Madaxweynaha maamulka Jubba Axmed Maxamed Islaam (Madoobe) iyo xubno ka tirsan maamulkiisa ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, waxaa soo dhoweeyey xubno ka tirsan gollaha wasiirada ee Soomaaliya.
Safarka Madaxweynaha Jubba ayaa ahaa mid horey loo shaaciyey, Madaxweynaha ayaa shir jaraa?id oo uu ku qabtay gudaha Garoonka Muqdisho, wuxuu ku sheegay in safarkoodu uu yahay mid balaaran oo ay Muqdisho ku joogi doonaan ilaa mudo toddobaad ah.
Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa shaaciyey ujeedada safarkooda Muqdisho, wuxuu ku tilmaamay in uu qeyb ka yahay dhamaystirka heshiiskii ay dowladda iyo maamulka Jubba ku gaareen Adis Ababa, iyo isagoo kulamo la qaadan doona siyaasiyiinta Jubbooyinka ee Muqdisho jooga.
Docda kale wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed oo isna shirka Jaraa?id ka hadlay ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubba ay heshiis yihiin haatan, isla markaasna ay dhamaadeen qul-qulatooyinkii iyo khilaafkii Jubbooyinka.
Safarka Madaxweynaha Jubba waxaa qeyb ka ah Odoyaal dhaqameed sar sare oo ka tirsan kuwa Jubbooyinka, iyo masuuliyiin ka socda dhinaca maamulka KMG ah ee gobolladaas.
Madaxweynaha Jubba inta uu muqdisho joogo, sidoo kale wuxuu kulamo la qaadan doonaa hugaanka sare ee dalka, oo ay ka wada hadli doonaan arrimaha Jubbooyinka iyo siyaasada guud ee dalka, sidaas waxaa war-baahinta u sheegay Afhayeenka Jubba Cabdinaasir Seeraar.